Oort क्लाउड को महत्त्व। सौर प्रणाली को सीमा | नेटवर्क मौसम विज्ञान
Oort क्लाउड। सौर प्रणाली को सीमा
क्लौडी क्यासलहरू | | Ciencia, मौसम विज्ञान
पृथ्वीमा मापन १ को अर्थ १ खगोलीय एकाई (एयू) हो, जुन पृथ्वीबाट सूर्यको दूरी हो। शनिको उदाहरण, १० एयू = पृथ्वी र सूर्यको बीचमा १० गुणा दूरी।
ओर्ट क्लाउड, «ikpik-Oort बादल as को रूपमा पनि चिनिन्छ, ट्रान्स नेपचुनिअन वस्तुहरूको काल्पनिक गोलाकार क्लाउड हो।। यो सीधा अवलोकन गर्न सकिँदैन। यो हाम्रो सौर प्रणाली को सीमा मा स्थित छ। र १ प्रकाश वर्षको आकारको साथ, यो हाम्रो निकटतम ताराबाट हाम्रो सौर्यमण्डल, प्रोक्सीमा सेन्टौरीको दूरीको एक चौथाई हो। यसको आकारको सूर्यको सम्बन्धमा विचार प्राप्त गर्न हामी केही डाटाको विस्तार गर्न जाँदैछौं।
हामीसँग यस क्रममा बुध, शुक्र, पृथ्वी र मंगल ग्रह छन्, सूर्यको सम्बन्धमा। सूर्यको किरणलाई पृथ्वीको सतहमा पुग्न It मिनेट र १ seconds सेकेन्ड लाग्छ। पछाडि, मंगल र बृहस्पति बीच, हामी एस्टेरोइड बेल्ट पाउँछौं। यस बेल्ट पछि, gas ग्यासका दिग्गजहरू, बृहस्पति, शनि, युरेनस र नेप्च्यून आउँनुहोस्। नेपच्यून सूर्यको तुलनामा करीव times० पटक जति टाढा पृथ्वीको चिन्ताको विषय हो। सूर्यको प्रकाश आउनको लागि लगभग hours घण्टा १ 8 मिनेट लाग्छ। यदि हामीले हाम्रो ग्रह सूर्यबाट सबैभन्दा टाढामा राख्यौं भने, ओर्ट क्लाउडको सिमाहरू सूर्यदेखि नेप्च्यूनको दूरी २,०2.060० पटक हुनेछ.
1 यसको अस्तित्व कहाँबाट घटाइएको हो?
2 के अवस्थित छ र Oort क्लाउड घेरामा छ?
3 ज्वार प्रभाव Oort क्लाउड र पृथ्वीमा
4 हाम्रो ग्रहमा प्रजातिहरूको लोप हुने चक्र
5 वैकल्पिक सिद्धान्त
यसको अस्तित्व कहाँबाट घटाइएको हो?
१ 1932 XNUMX२ मा, खगोलविद् एर्न्स अपिक, उनले यस्तो पोष्ट गरे कि लामो अवधिसम्म घुमाउरो धूमकेतु सौर्यमण्डलको सीमाभन्दा बाहिरको ठूलो बादल भित्र देखा पर्‍यो। १ 1950 In० मा खगोलविद् जान आउर्ट, उनले सिद्धान्त स्वतन्त्र रूपमा विरोधाभासको परिणामस्वरूप पोस्ट गरे। जान ओर्टले आश्वासन दिए कि उल्का पिंडहरू उनीहरूको हालको कक्षामा गठन गर्न नसक्ने खगोलीय घटनाले गर्दा उनीहरूमाथि शासन गर्छ, त्यसैले उनले आश्वासन दिए कि तिनीहरूका कक्षा र ती सबै ठूला क्लाउडमा भण्डार हुनुपर्छ। यी दुई ठूला खगोलविद्हरूका लागि, यो विशाल बादलले यसको नाम प्राप्त गर्दछ।
Oort दुई प्रकारका धूमकेतुहरूको बीचमा जाँच गरियो। ती १०AU भन्दा कमको कक्षाका साथ र लामो अवधिको कक्षाका साथ (लगभग isotropic), जुन १०००AU भन्दा ठूलो छ, २००० सम्म पुग्छ। उनले सबै देखे सबै कसरी देखि आए भनेर पनि उनले देखे। यसले उसलाई त्यो घटाउन अनुमति दियो, यदि तिनीहरू सबै दिशाबाट आउँदै थिए, काल्पनिक क्लाउड आकार गोलाकार हुनुपर्छ।
के अवस्थित छ र Oort क्लाउड घेरामा छ?
को काल्पनिक अनुसार Oort क्लाउड को उत्पत्ति, हाम्रो सौर प्रणाली को गठन मा छ, र ठूलो टक्करहरू जुन अवस्थित थियो र सामग्रीहरू जुन फायर गरियो। वस्तुहरू जुन यसलाई बनाउँदछन् यसको शुरुआतमा सूर्यको नजिकबाट गठन गरिएको थियो। यद्यपि विशाल ग्रहहरूको गुरुत्वाकर्षण कार्यले उनीहरूको परिक्षण पनि बिगार्‍यो र ती टाढाका स्थानहरूमा पठाइदिए।
धूमकेतु कक्षा, नासा द्वारा सिमुलेशन
Oort क्लाउड भित्र, हामी दुई भागहरू छुट्याउन सक्छौं:
आन्तरिक / इनडोर Oort क्लाउड: यो सूर्यको लागि गुरुत्वाकर्षणसँग सम्बन्धित छ। हिल्स क्लाउड पनि भनिन्छ, यो डिस्क जस्तै आकारको छ। यो २,००० र २०,००० एयू बीच मापन गर्दछ।
Oort क्लाउड बाह्य: गोलाकार आकारमा, अन्य ताराहरू र ग्यालेक्टिक टाइडसँग बढी सम्बन्धित छ, जसले ग्रहहरूको कक्षा परिमार्जन गर्दछ, तिनीहरूलाई अधिक गोलाकार बनाउँछ। २०,००० र ,20.000०,००० एयू बीचको मापन। यो जोड्नु पर्छ यो वास्तवमा सूर्यको गुरुत्वाकर्षण सीमा हो।
समग्र रूपमा ओउर्ट क्लाउडले हाम्रो सौर्यमण्डलका सबै ग्रहहरू, बौने ग्रहहरू, उल्का पिण्डहरू, धूमकेतुहरू र अरबौं आकाशीय पिण्डहरूलाई १.1,3 किमि व्यास भन्दा माथि समेट्छ। आकाशीय पिण्डहरूको यति महत्वपूर्ण संख्या भए पनि, ती दुई बीचको दूरी दशौं लाख किलोमिटर रहेको अनुमान छ। यो हुनेछ कुल जन अज्ञात छ, तर एक प्रोटोटाइप ह्यालीको धूमकेतुको रूपमा गर्दै, एक अनुमान बनाउँदै, यो लगभग × × १० ^ २k किलोग्राम अनुमान गरिएको छ, जुन ग्रह पृथ्वीको भन्दा times गुणा छ।
ज्वार प्रभाव Oort क्लाउड र पृथ्वीमा
चन्द्रमाले समुद्री सतहमा समुद्री जग्गालाई बढावा दिदै, समुद्री जग्गालाई बढाए झैं गरी, यो घटाइएको छ लाक्षणिक रूपमा यो घटना हुन्छ। एउटा शरीर र अर्को बीचको दूरीले गुरुत्वाकर्षणलाई घटाउँछ जुन एकले अर्कोलाई प्रभाव पार्छ। वर्णन गरिएको घटनालाई बुझ्नको लागि, हामी चन्द्रमा र सूर्यको गुरुत्वाकर्षण पृथ्वीमा प्रबल हुन्छ कि बलमा हेर्न सक्छौं। सूर्य र हाम्रो ग्रहको सम्बन्धमा चन्द्रमा भएको स्थानमा निर्भर गर्दै, ज्वार भिन्नतामा भिन्न हुन सक्दछ। सूर्यको साथ प al्क्तिबद्धताले हाम्रो ग्रहमा त्यस्तो गुरुत्वाकर्षणलाई प्रभाव पार्छ कि किन ज्वार किन यति बढ्छ भनेर वर्णन गर्दछ।
ओर्ट क्लाउडको मामलामा, मानौं कि यसले हाम्रो ग्रहको समुद्रहरू प्रतिनिधित्व गर्दछ। र मिल्की वे चन्द्रलाई प्रतिनिधित्व गर्न आउँथ्यो। त्यो ज्वार प्रभाव छ। के यो उत्पादन गर्दछ, ग्राफिक वर्णन जस्तै, हाम्रो आकाशगंगा को केन्द्र तिर विकृति छ। सूर्यको गुरुत्वाकर्षण शक्ति हामीले यसबाट जति टाढा हुन्छौं भन्ने कुरालाई ध्यानमा राख्दै, यो सानो शक्ति केही आकाशीय पिण्डहरूको आन्दोलनलाई बाधा पुर्‍याउन पनि पर्याप्त छ, यिनीहरूलाई फेरि सूर्यतिर पठाइएको थियो।
हाम्रो ग्रहमा प्रजातिहरूको लोप हुने चक्र
वैज्ञानिकहरूले प्रमाणित गर्न सकेका केहि छ हरेक २ million मिलियन बर्षमा, त्यहाँ दोहोरिने बान्की छ। यो यी अवधिहरूमा प्रजातिहरूको पर्याप्त संख्याको लोप हुने बारेमा हो। यद्यपि यस घटनाको कारण निश्चित रूपमा भन्न सकिदैन। Oort बादलमा मिल्की वेको ज्वार प्रभाव यो विचार गर्न एक परिकल्पना हुन सक्छ।
यदि हामीले ध्यानमा राख्यौं कि सूर्य आकाशगंगाको वरिपरि घुम्छ, र यसको कक्षामा यो "ग्यालेक्टिक प्लेन" को माध्यमबाट केही नियमितताको साथ जान्छ भने, यी विलुप्त हुने चक्रहरू वर्णन गर्न सकिन्छ।
यो गणना गरिएको छ कि प्रत्येक २० देखि २ million लाख वर्षमा, सूर्य ग्यालेक्टिक प्लेनबाट गुज्रन्छ। जब त्यसो हुन्छ, ग्यालेक्टिक प्लेन द्वारा लिइएको गुरुत्वाकर्षण बल सम्पूर्ण Oort क्लाउडलाई गडबड गर्न पर्याप्त हुनेछ। यो विचार गर्दा यसले क्लाउड भित्रका सदस्य निकायहरूलाई हल्लाउँछ र गडबड गर्दछ। तिनीहरू मध्ये धेरैले सूर्यतिर धकेल्नेछन्।
अन्य खगोलविद्हरूले विचार गर्छन् कि सूर्य पहिले नै यस ग्यालेक्टिक प्लेनमा पर्याप्त नजिक छ। र उनीहरूले ल्याउने विचारहरू त्यो हो गडबडी आकाशगंगाको सर्पिल हातबाट आउन सक्छ। यो सत्य हो कि त्यहाँ धेरै आणविक बादलहरू छन्, तर पनि तिनीहरू निलो राक्षस संग पट्टि छन्। तिनीहरू धेरै ठूला ताराहरू हुन् र तिनीहरूको जीवन छोटो छोटो छ, किनकि उनीहरूले द्रुत रूपमा तिनीहरूको आणविक ईन्धन खपत गर्दछन्। प्रत्येक केहि मिलियन बर्ष केहि नीलो राक्षसहरू विस्फोट, सुपरनोवाको कारण। यसले कडा मिलाउने वर्णन गर्दछ जसले Oort क्लाउडलाई असर गर्दछ।
यो जस्तो हुन सक्छ, हामी यसलाई ना naked्गो आँखाले बुझ्न सक्दैनौं। तर हाम्रो ग्रह अझै अनन्त मा बालुवा को एक अन्न हो। चन्द्रमादेखि हाम्रो आकाशगंगासम्म, तिनीहरूले आफ्नो उत्पत्ति, जीवन र अस्तित्वबाट प्रभावित गरेका छन् जुन हाम्रो ग्रहमा स्थिर छ। हामी अहिले देख्न सक्ने भन्दा धेरै चीजहरू अहिले भइरहेको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » मौसम विज्ञान » Oort क्लाउड। सौर प्रणाली को सीमा
समुद्री सतहको स्तरले लन्डन र लस एन्जलसलाई जोखिममा राख्यो
कम बालबालिका, मौसम परिवर्तन विरुद्ध लड्न सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय मध्ये